Global Voices teny Malagasy » Na Iray Aza Tsy Nisy Afa-panadinana Tany Amin’ny Anjerimanontolo Ireo Mpianatra Liberiana Tamin’ity Taona ity · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Septambra 2013 20:13 GMT 1	 · Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika miora
Sokajy: Afrika Mainty, Liberia, Fanabeazana, Mediam-bahoaka
Raha manamarika ny fahafolo taonan’ ny Fifanekem-pihavanan'i Accra , izay namarana ny ady sivily  naharitra 14 taona i Liberia, mpianatra eo amin'ny 25.000 avy amin'ny kilasy famaranana no tsy afaka tamin'ny fanadinana fidirana  ho any amin'ny Anjerimanontolon'i Liberia tamin'ity taona ity. Ity no fotoana voalohany tsy nisiana mpifaninana na iray aza afa-panadinana fiidirana taona voalohany.
Nitatitra ny BBC fa sarotra ho an'ny Minisitry ny Fampianarana ao Liberia, Etmonia David-Tarpeh, ny hino fa tsy nisy na dia mpianatra iray aza afa-panadinana. Noho izany dia mikasa ny hihaona amin'ireo mpitantana ny anjerimanontolo izy hiresaka momba io olana io. Manoritra io tahan'ny tsy fahafahana io ho “famonoana vahoaka faobe”  izy.
Ity ny fomba nanoritan'i Calestous Juma (@calestous ), Mpampianatra Mpikaroka ao amin'ny Sekoly Harvard Kennedy ao Kenya an'ireo vaovao:
Vaovao ratsy indrindra avy aty #Africa  hatramin'i Leopold II ao #Congo : tsy nisy afaka fanadinam-pidirana eny amin'ny anjerimanontolo ireo mpianatra ao #Liberia  http://t.co/HkSlxDCbR8 
Ny Mpanjaka Leopold II  an'i Belzika no tompon'ny Fanjakana Mizakatenan'i Kôngô taloha, izay ny Repoblika Demokratikan'i Kôngô amin'izao fotoana, ny 1885 ka hatramin'ny 1908.
Saran Kaba Jones (@sarankjones ), mpiaro ny rano madio sy mpandraharaha ara-tsosialy, dia nilaza fa mampalahelo izany nefa tsy mahagaga:
Mampalahelo nefa tsy mahagaga >> tsy nisy afaka fanadinana fifindrana any amin'ny anjerimanontolo avokoa ireo mpianatra ao #Liberia.  Izy 25.000! >>http://t.co/9AJkvEelej 
Mbas Ndriver (@Kenfreykj ), Kenyana manam-pahaizana momba ny IT, dia nanontany tena ny tsy nisian'olona na dia iray aza kinga saina mba nanao hosoka:
Nilaza i Eja Nla (@Muntez_ ), Kenyana iray hafa mpitoraka bitsika, fa tsy tokony ho ara-dalàna ny tsy fahafahan'ireo mpianatra rehetra:
Toa tsy mahay antontanisa i #Liberia . Tsy tokony ho ara-dalàna ny tsy fahafahan'ireo mpianatra rehetra taminà fanadinana iray. Izy 25.000 manontolo ve? Tsy mitombina izany.
Ebenezer Flomo (@ebflomo ), mpiara-nanangana ilay fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa manokana Help Encourage Liberia's Little Ones (@helpHELLO ), nanamarika fa tsy manana boky ireo toeram-pianarana any Liberia:
@lizgrossman87  Itanao ry Liz, izao indrindra no antony ifantohanay @HelpHELLO  manodidina ny tontolon'ny fanabeazana aty #Liberia . Tsy manana boky ireo toeram-pianaarna.
Sekoly maro any Liberia no tsy ampy fitaovana fampianarana fototra  ary maro ireo mpampianatra tsy dia mahay ny asany.
Manontany i Denis Eyong (@eyongdenis ) izay mitoraka bitsika avy any Rosia:
Firenena iray izay azo antsoina ho dondrona, #Liberia . Ahoana no hisian'ireo mpianatra rehetra ao amin'ny firenena tsy ho afaka amin'ireo fanadinana fifindrana any amin'ny anjerimanontolo?! http://t.co/JdrASJmkUW 
“Ahoana no fomba hahasitranan'ny firenena potipotiky ny ady sivily?,” hoy i Tomoko Perez (@Tomoshiga ) any New York nanontany:
Iny bitsika farany mikasika an'i #Liberia  iny. TENA tsy mampihomehy. Ahoana no fomba hahasitranan'ny firenena potipotiky ny ady sivily? Ahoana no hampiasànao vola any sy hamoronana harena?
Nizara teny avy aminà mpandraharaha iray ao amin'ny anjerimanontolo ny mpanao gazety Gambiana sady mafana fo amin'ny zon'olombelona, Sulayman Makalo (@MakaloMansa ):
#Liberia : Tsy ampy fahavitrihana ireo mpianatra ary tsy tsara fototra tamin'ny Anglisy tsara, hoy ny mpitantana iray avy amin'ny anjerimanontolo tao amin'ny BBC.
Nanamarika i Nuesity! (@Nues_Ibunos ):
Mampalahelo izany. Manantena aho fa tsy hitontongana anatin'izany i Nigeria! #ASUU  #Education  #Nigeria  #Liberia  http://t.co/gq7ejsZdWv 
Nampitandrina  ireo tanora mpiray tanindrazana aminy ilay mpitoraka bilaogy ao Ghana, Tenace Kwaku Setor (@kwakutii):
izao no ateraky ny ady politika, ry Ghaneana malala. Tsy nisy afaka avokoa ireo mpianatra 25.000 rehetra nipetraka hanala fanadinana CE ho any amin'ny anjerimanontolo. #liberia  http://t.co/PtsvndysZd 
mbola ratsy noho ny tranga tao Tanzania: samy tsy nisy afaka fanadinana hifindrana amin'ny anjerimanontolo avokoa ireo mpianatra ao #Liberia  http://t.co/P7GZHon6Me 
Mpianatra enina isaky ny mpianatra 10 izay nipetraka hanala fanadinana nasionaly “National Form Four examination” tany Tanzania no tsy afaka  tamin'ny herintaona.
Mika Mäkeläinen (@Mikareport ), vahiny mpanao gazety mpitatitra ny vaovao ao amin'ny Finnish Broadcasting Company, dia nampitandrina ireo izay te-hianatra any amin'ny Anjerimanontolon'i Liberia:
Te-hianatra tany amin'ny Anjerimanontolon'i #Liberia ? Niangaran'ny vintana. 25.000 no niezaka ary tsy nisy afaka tamin'ny fanadinana fifindrana. http://t.co/eNIew0neno 
Nihanihany i Daniel McLaughlin (@DanielJMcLaugh ) avy ao Angletera:
Tsy hiasa saina loatra mikasika Lanonana fandraisana ireo Mpianatra vaovao amin'ity taona ity izy ireo! #Liberia  http://t.co/iA6AKZsP3s 
Miampanga ny rafi-pampianarana i A. K. Ohemeng-Boamah (@akobII ) avy ao Ginea:
Ny rafitra no ampangaiko fa tsy ireo mpianatra. @MollyKinder : Oao – tsy nisy afaka ny mpianatra nanala fanadinana fidirana ho any amin'ny anjerimanontolo any #Liberia , hoy ny @BBCWorld 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/09/08/51139/
 fahafolo taonan’: http://allafrica.com/stories/201308210849.html
 Fifanekem-pihavanan'i Accra: http://en.wikipedia.org/wiki/Accra_Comprehensive_Peace_Agreement
 ady sivily: http://en.wikipedia.org/wiki/Liberian_Civil_War
 tsy afaka tamin'ny fanadinana fidirana: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-23843578
 “famonoana vahoaka faobe”: https://mg.globalvoices.org http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-23843578
 nilaza : http://www.voanews.com/content/liberia-university-admission-exam-mass-failures/1737581.html
 August 26, 2013: https://twitter.com/calestous/statuses/372135148428738560
 Ny Mpanjaka Leopold II: http://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_II_of_Belgium
 August 26, 2013: https://twitter.com/sarankjones/statuses/372055550395031552
 August 27, 2013: https://twitter.com/Kenfreykj/statuses/372246296239046657
 August 27, 2013: https://twitter.com/Muntez_/statuses/372209737481605120
 August 27, 2013: https://twitter.com/ebflomo/statuses/372221681051267073
 no tsy ampy fitaovana fampianarana fototra: http://www.africanspotlight.com/2013/08/26/all-liberia-students-fail-university-admission-exam/
 August 27, 2013: https://twitter.com/eyongdenis/statuses/372214161889300480
 August 27, 2013: https://twitter.com/Tomoshiga/statuses/372210897022091264
 August 27, 2013: https://twitter.com/MakaloMansa/statuses/372229356740829185
 August 27, 2013: https://twitter.com/Nues_Ibunos/statuses/372227864743006209
 August 27, 2013: https://twitter.com/kwakutii/statuses/372260859889717248
 August 26, 2013: https://twitter.com/Proud2bRwandan/statuses/372067534063042561
 no tsy afaka: http://www.businessdailyafrica.com/Sixty+per+cent+of+Tanzania+students+fail+exam/-/539546/1699100/-/io0d1nz/-/index.html
 August 26, 2013: https://twitter.com/Mikareport/statuses/372127886167113728
 August 27, 2013: https://twitter.com/DanielJMcLaugh/statuses/372168725711314944
 August 27, 2013: https://twitter.com/akobII/statuses/372148964654874624